Kubadda Webmaster / Tuesday, January 1, 2008
Sida taariikhdu xusayso marka laga hadlayo ciyaarta kubbadda koleyga ee Soomaaliya, Cabdi dheere waxaa uu ka mid ahaa ciyaaryahannadii ama halyeeyadii ugu horreeyay ee magaca Soomaaliyeed gaarsiiya Caalamka Carabta iyo Afrikaba. Cabdi dheere waxaa uu ka mid ahaa tiirarka ay ku dhaaran jireen kooxdiisa Jeenyo oo uu kaalin wayn uga jiray, sidoo kalena waxaa uu ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsanaa xulka qaranka.
Ka dib markuu ka fadhiistay ciyaaaraha Cabdi Dheere waxaa uu u wareegay dhanka tababaranimada, waxaana uu ahaa tababare aqoontiisu aad u sarreysay, guulo badanna u horseeday kooxdiisa Jeenyo iyo xulka qarankaba.
Cabdi Dheere waxaa uu ku dhashay magaalada jamaame ee gobolka Jubbadda Hoose sannadku markuu ahaa 1952kii, waxbarashadiisa dugsiga hoose/dhexe waxaa uu ku qaatay isla magaaladaasi jamaame isaga oo dhigan jiray dugsigii la oran jiray “Jubba School” , dabadeedna dugsigii caafimaadka ayuu u wareegay oo ay gacanta ku hayeen ajaanib isugu jiray Amerikan iyo Canadian oo ay ahayd meeshii ugu horraysay oo uu ku bilaabo ciyaarta kubbadda koleyga, dabadeedna waxaa uu u soo wareegay magaalada Xamar oo uu ku dhammaystay waxbarashadiisa dugsiga sare isaga oo ka baxay dugsigii sare ee Badda. 1984kii ayuu Cabdi dheere ka qalin jabiyay kulliyadda waxbarashada lafoole isaga oo ku takhasusay maadooyinka Biology iyo Chemistry. Tababare Cabdi dheere waxyaabaha ay bulshada Isboortiga sida aadka ugu xusuustaan waxaa ka mid ahaa: Isagoo ahaa shakhsi aad u deggan, dabeecad wanaagsan, qosol badan, Samir badan, Wadaninimadu ku dheer tahay oo aad uga dhiidhiya guul-darada, jecel ciyaartooydiisa aadna u dhiirri-galiya, soo saarista ciyaartooy cusub oo wax-tar leh.
Waxaana intaasi u sii dheeraa isagoo ahaa tababare aad u xammaasad badnaa marka la isugu yimaado goobaha ay ka socdaan tartammada ciyaaraha.
Cabdi Dheere waa xaas leh 6 caruur ah, waxaana uu ku nool yahay magaalada Toronto-Ontario ee dalkaasi Canada.
Haddaba waxaa ii suuro-gashay inaan wax ka qoro Taariikhdii Isboorti ee Tababare Cabdi dheere, waraysigaasi isaga ah oo dhinacyo badan taabanayay ayaan ku soo koobay sidan:
Goorma ayaad billowday Ciyaaraha? Yaase kugu dhiirrigaliyay?
Cabdi Dheere:Ciyaaraha sidoodaba waxaan bilaabay aniga oo aad u da,yar oo markaasi dhiganayay fasalada 5aad & 6aad ee dugsiga Hoose/dhexe Jubba oo ku yaallay magaalada jamaame, waxaana markii ugu horreysay igu dhiirri-galiyay laba macallin oo Maraykan ahaa oo iyagu macallimiin ka ahaa dugsiga oo la kala oran jiray Chaser Kurtis iyo Goodman……Waxaa xusid mudan in labadan nin ay ahaayeen labo nin oo aad isugu hawlay horumarinta isboortiga dugsiga, iyaga oo ka dhisay halkaasi garoomo lagu ciyaaro kubbadda koleyga oo aan dhismihiisa kala qayb-qaadanay, waxayna noqotay goobtii iigu horraysay oo aan kaga hanaqaado kubbadda koleyga.
Ma jireen noocyo kale oo isboorti oo aad ka qayb-gashay?
Cabdi Dheere: Haa waa jireen siiba ciyaaraha kubbadda cagta iyo ciyaaraha fudud ”Athletics” oo aan ka qayb-qaatay xilligii aan dhiganayay dugsiga Jamaame...... Runtii waxaan aad u sii jeclaa ciyaaraha fudud oo aan oran karo waa hooyadii Isboortiga taasoo aan sabab uga dhigayo haddii uu ciyaaryahanku awooddiisa iyo awoodda wada shaqaynta jirkiisa ay wanaagsan yihiin waxaa ay sahli kartaa inuu ka qayb-qaato nooc kasta oo ciyaareed oo uu doono, ilaa haatan aad baan u jeclahay daawashada ciyaaraha fudud, hase yeeshee xilligaasi talooyinkii ay ii soo jeediyeen labadaasi macallin ayaan qaatay oo aan u go'ay ciyaarta kubbadda koleyga.
Ma ka qayb-gashay tartamadii ciyaaraha gobollada?
Cabdi Dheere: 1971 kii ayaan ka qayb-galay, waxaana ay ahayd waqtigaasi mid u furan ciyaaryahanka heerka 1aad Iyo kan gobolka ka yimaada...hase yeeshee markii dambe waa la sharciyeeyay oo lama oggolayn in ciyaaryahan heerka 1aad uu ka qayb-galo tartamadii ciyaaraha gobollada. Sidoo kale iyaduna waxaan ka qayb-galay tartammadii ciyaaraha dugsiyada.
Ma xusuusan kartaa waxyaabihii xusuusta gaarka kugu reebay intaad ku dhex jirtay ciyaaraha, markaad ciyaaraysay iyo markii dambe oo aad macallinka noqotay labadaba?
Cabdi Dheere: waxyaabaha xusuusta gaarka igu reebay oo ilaa haatan maskaxdayda ay soo goconayso ayaa ahayd iyadoo ay na soo mareen ciyaartooy faro badan oo qiimo badnaa kuwaasi oo xirfaddoodii ciyaareed aan ku tilmaami karo “ Hibo Eebe” Sida: Bashiir Foxs, Qardhaas, Afweyne, Bile Warsame, Cabdulqaadir Shiikha, Axmed Xaaji Nuur, Gees, Maxamuud, Saciid Qorsheel, Cabdalla Dheere, iyo ciyaartooy fara badnaa oo aan halkan ku soo wada koobi karin...waxaan qabaa ciyaartooydani haddii adduunyada kale loo furi lahaa inay wax-tar wayn u yeelan lahaayeen dalka Soomaaliya, dunidana ay magac wayn ka kasban lahaayeen.
Kooxdaadii kubbadda koleyga ee Jeenyo” LL.PP” wax guulo ah ma gaareen intii aad u ciyaaraysay?
Cabdi Dheere: Marka laga soo bilaabo1970 kii ilaa 1978kii kooxda kubbadda koleyga ee jeenyo dalka Soomaaliya caan bay ka ahayd, waxayna ku guulaysteen dhammaanba wixii koobab ahaa ee la dhigay ha noqdeen jeneraal daa,uud iyo horyaal intaba.
Goorma ayaad ku biirtay ciyaaryahannada heerka qaran ee kubbadda koleyga Somaaliyeed?
Cabdi Dheere: 1973kii ayaan ku biiray oo aan ka tirsanaa ilaa 1978kii
Tartamadii ciyaaraha caalamiga oo aad ka qayb-gashay iyo kooxihii aad la ciyaartay wax ma xusi kartaa?
Cabdi Dheere: Xaqiiqdii ciyaaro faro badan oo caalami ahaa ayaan ka qayb-galay oo markastaaba waan bixi jirnay oo waxaan ka qayb-gali jirnay ciyaaraha caalamiga ah ee dibadaha lagu qabanayay, kooxihii aan la ciyaaray oo fara badnaa waxaa ka mid ahaa: Kooxdii ka socotay Xulka qaranka Russia oo la oran jiray “Dinamo Kev, Zair, Masar,Central Afrika, Sudan,iyo ciyaaro faro badan oo aan runtii wada xusuusan karin, waayo marka laga soo bilaabo 1973kii ilaa 1978kii ciyaaro caalami Iyo kuwo heer Zone ayaan ka qayb-galayay oo marba aan meel u safrayay.
Maxaa ka mid ahaa guuldarrooyinkii kuugu xumaa oo ku soo intii aad ku dhex jirtay kooxdaadii jeenyo & xulka qarankaba?
Cabdi Dheere: Guuldarradii iigu xumayd ama aan oran karo iigu waynayd,ilaa hatanna maskaxdayda ka guuxaysa intaan ku dhex jiray Isboortiga waxay ahayd ciyaarihii All African games oo 1987kii lagu qabtay Nairobi oo kooxdii qaranka Kenya ay naga reebeen ciyaarihii semifinalka oo 100% ay rajadeenu ahayd inaan u soo baxno,waxaana ay ahayd habeen cajaaib ah oo aan qaadan kari waayay guuldarradaasi,,waayo kooxaha Kenya Awood ahaan iskuma aanan dhaweyn….Waxaan xusuustaa annagoo kooxda Jeenyo ah oo ka imaanay ciyaarihii isreebreebka horyaalada Afrika oo lagu qabtay Muzambique inaan ciyaaro saaxiibtinimo oo faro badan la samaynay kooxaha Kenya oo dhammaantoodba aan dhulka ku jiidnay, markaa marnaba maskaxda kumaanan hayn in kooxda Kenya ay naga adkaan karaan. habeen cajaaib badan ayay ahayd.
Farxaddaadii kuugu waynayd bal iyadu ka warran?
Cabdi Dheere: Guulo badan oo aan aad ugu farxay ayaa I soo maray intaan ciyaartooyga ahaa ama macallinka ahaa,hase yeeshee farxaddii iigu waynayd waxay ahayd Markii kooxdii aan macallinka u ahaa aan ka adkaanay kooxdii kubbadda koleyga ee Masar oo iyagu juhdi iyo dhaqaale badan la galiyay,tababar dibadda ahna ku soo qaatay. Waxaan illoowaynin tashigii ugu dambeeyay(TimeOut) oo aan qaadanay 15 kii second ee ugu dambeysay ciyaarta oo ay naga horreeyeen 2 dhibcood iyo sidii quruxda badnayd oo adiga (Shiikha) aad goolka ugu hubisay goolkii guusha taasi ayaana iigu farxad badnayd….Markii aan Nairobi tagnay hadalhaynta ugu badan oo ay jaraaidyada Kenya qoreen ayaa waxay ahayd Kooxdii reer guuraaga ..The Nomadic People waxy ka soo adkaadeen halyeeyadii Afrika ee Kubadda Koleyga.
Yaad aad u jeclayd inay garbahaaga buuxiyaan markaad ka tirsanayd kooxdaadii Jeenyo iyo xulka qarankaba?
Cabdi Dheere: Dhammaan ciyaartooyda waan wada jeclaa ha noqdeen heer qaran ama heerka 1aad,waliba waxaan aad u sii jeclahay marka 2,3,4,ama5 ciyaartooy uu isfagarad ciyaareed dhex maro oo jaanta ay isla helaan,hase yeeshee markaan su,aashaada ka jawaabo,Kooxdayda Jeenyo waan wada Jeclaa oo ma kala dhicin….Saciid Qorsheel oo aad ugu wanaagsanaa qaybinta,aragtidiisuna ay aad u heer sarreysay oo aan ku tilmaami karo sida laacibkii waynaa ee Lakers (Magic Johnson),Axmed Xaaji Nuur,Gees, Cabdullahi Qaadwale,Maxamuud,C/llahi Xasan Ciid,Jeeri qalloocoow. Dhanka Xulka qaranka waxaan aad u jeclaa :5teennii Jeenyo ama Xuseen Jeeri oo 6 nagu noqon jiray mararka qaarkood,Cabdalla Shiino, Cali Faarax Siyaad,Sarxaan Dheere,Cali qaraab(Allaha u naxariistoH),Jaarlees iyo in kaloo badan oo aan xusuusan.
Ma jireen Guulo gaar ahaaneed oo adigu aad ciyaaraha ka gaartay?
Cabdi Dheere: Haa waa ay jireen waxaana ka mid ah:
A) 1970 -1978 guulo faro badan oo uu inoo horseeday Macallinkeennii Ibraahim Xasan oo ku magac dheeraa UGO ayaa jiray waxaana ku guulaysanay koobabkii ugu faro badnaa ee horyaalka iyo jeneraal daa'uud.
B) 1978 kii markii kooxdii Jeenyo ay kala tageen ,1980 kii Tababare ayaan noqday,1 sano iyo bar gudaheeda waxaan ku soo dhisay dhallinyaro yaryar oo aan soo gaarsiiyay ciyaaraha semifinalka. Waxaana sharaf ii ahayd in kooxdii aan gacanta ku hayay ay ku guulaysteen 4 Horyaal ah iyo 1 koob oo Jeneraal daa'uud ah taasoo aan filayo inuusan jirin tababare gaara heerkaasi
C) Abuuritaankii,dhisiddii iyo soo sariddii jiil cusub oo kooxda Jeenyo ah ama kaalin fiican ka galay ciyaarihii heerka 1aad iyo xulka qaranka muddo gaaban gudahooda sida: Cabdalla Dheere, Cabdi Xalwo,Daley, iyo Cabdulqaadir Madaxey.
Heerkaaga aqooneed ee tababaranimada halkee gaarsiisnayd?
Cabdi Dheere: Markii aan soo dhammaystay waxbarashadaydii jaamacadda lafoole,dabadeed waxaan qaatay Koorosyo badan oo kubadda koleyga oo dalka gudahiisa iyo dibaddiisa ah. 1986kii waxaan tababar u aaday dalka Maraykanka,Sidoo kale 1987 kii waxaan tababar heer caalami ah u aaday dalka talyaaniga magaalada Montacatini.
Sidee buu ahaa heerka aqooneed ee tababarayaasha iyo garsoorayaasha Soomaaliyeed ee kubbadda Koleyga?
Cabdi Dheere:Marka loo eego dalkaasi yar ee faqiirka ah iyo heerka uu gaarsiisnaa tababarayaasha iyo garsoorayaasha Soomaaliyeed waxaan oran karaa aad buu uga heersarreey dalalka Afrika ee qaniga ahaa, hase yeeshee waxaa ay u baahnaayeen koorosyo faro badan. waxaa iyaguna jiray Tababarayaal aqoon sare lahaa oo aan ka xusi karo Ismaaciil Kaamil ,sidoo kale garsoore Cabdi Calasoow ayaa tusaale fiican u ahaa garsoorayaasha oo aqoontiisa garsooranimo ay aad u sarreysay,waxaana ay u badnaayeen dad wax bartay oo ka qayb-galay koorosyo caalami ah oo ay ( FIBA )qabanqaabisay amaba dhexdhexaadiyay ciyaaro caalami ah.
Maamulka Isboortiga Soomaaliyeed isagu sidee buu ahaa?
Cabdi Dheere: 1970 kii ayaan oran karaa waxay ahayd markii indhaha ay kala furtay kubadda Koleyga,Xilligaasi dadkii ka shaqaynayay ama ilaa haatan ka shaqaynaya waa dad aqoon leh,iyo dad aqoontoodu hoosaysay laakiin dadaalkoodu aan oran karo wuxuu ka horreeyaa kan aqoonta leh oo aad u dadaal badanaa ,hase yeeshee awoodda fulineed ayaa yarayd oo go,aanka waxaa iska lahaa wasaaradda isboortiga.
Maxaa farqi ah oo u dhaxeeya Ciyaarihii dalkeennii Soomaaliya iyo kuwa haatan aad ku aragtay North Ameerika?
Cabdi Dheere:Farqi aad u wayn ayaa u dhaxeeya,marka aad u fiirsato halkan aan joogno garoomada (Facilitation),Jirdhiska, cuntada miisaaman (Nutirition), Ilaha ku hawlan horumarinta isboortiga oo aad u faro badan, Intuba waa nooga horreeyaan,hase yeeshee ururada ama bulshada Soomaaliyeed ee isboortiga (North Ameerika) gaar ahaan Canada ma aha dad habaysan oo isku duuban, ixtiraamka,kala dambaynta iyo is maqalkuna waa ku yar yahay… Dhinaca kale dalkeennii Soomaaliya in kastoo ilaha horumarinta isboortiga uu yaraa haddana bulshada isboortiga waxaa ay ahaayeen dad aad isugu habaysan,isku duuban, ixtiraam leh, is maqalkooduna uu aad u sarreeyay, qiiro wadaninimona ay ku jirtay.
Marka aad cabirto ra'yigaaga sidee lagu horumarin karaa isboortiga Soomaaliya guud ahaanba?
Cabdi Dheere:Waxaa lagu horumarin karaa marka hore inaan ka qaybqaadano isboortiga dalalkan aan joogno oo isboortiga ku horumaray oo macaamil uu na dhexmaro,is dhaafsano aqoontii, ciyaaraihii. Is dhexgal isboorti uu na dhex maro dadka aqoonta u leh isboortiga tagnoo xarumaha isboortiga,waxbarashadii dhex galno,markaasi aqoontii aan halkan ka helno aan u gudbino dalkeennii Soomaaliya.
Ugu dambayntii maxaa talo ah oo aad u soo jeedin lahayd ummadda Soomaaliyeed ee ku hawlan noocyada isboortiga ee kala duwan?
Cabdi Dheere: waxaan talo ahaan ugu soo jeedinayaa marka hore dadka dibadaha jooga wuxuu doono ha noqdo, ama ha ku takhasuso waa inay hormuud ( Role Models ) u noqdaan caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya ama ku dhashay, waa inay caruurta Soomaaliyeed gacanta ku qabtaan, xoojiyaan dhaqankii, Diintii, waxbarashadii, akhlaaqdii iyo wanaaggii ay lahayd Bulshada Soomaaliyeed, si loo badbaadiyo Ubadkii waa in laga xoojiyaa dhan kasta haddii aan arrimahaasi loo wada hawl galin waxaa ay ku dhammaan doonaan caruurta Soomaaliyeed waddooyinka, mustaqbalkoodana mugdi ayuu gali doonaa…Kuwa gudaha Soomaaliya joogana waxaan uga gaabsanayaa Ilaahay nabadgalyo ha siiyo, hana dadaaleen dhibaatadu mar uun waa dhammaan doontaa Inshaa-Allahu.
Cabdi Dheere, inkastuu ku nool yahay waddan shisheeye oo aad uga fog dalkii hadana weli kama jiifo soo saarista iyo abuurista caruur da'yar oo Soomaaliyeed oo mustaqbalka wax tarta dalkeeni hooyo. Cabdi wuxuu hada tababare iskaa wax u qabso ah u yahay caruur da'yar oo ku nool dalka Canada magaaladiisa Toronto.
Akhristayaasheena qaaliga ahoow waxaa intaas inoogu dhamaaday wareysigii xiisaha lahaa ee aan la yeelanay macalin Cabdi Maxamed Ciye (Cabdi dheere). Waraysigeena kan ku xiga waxaan isna ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah xidigihii kubadda cagta dalkeena soomaray 50 meeyadii oo lagu magacaabo Cumar Abuukar Maxamed ( macalin Cumar ), oo macalina u ahaa naadigii BATROOLKA ee kubadda cagta. Waxaan filayaa in ay dad badani horay magaciisa ka garteen. Ha moogaanina dhawaan.
Cabdulkadir Hagi Dahir (Shiikha)
Somali-youth.org - Minneapolis
Previous Article WARAYSI CAJIIB AH OO AAN LA YEELANAY AXSAN LAACIB SHIIKHAALOOW
Next Article TAARIIKHDA MACALINKII NAADIGA BATROOLKA (MACALIN CUMAR)
6014 Rate this article: